Josephus Ankasa na Ɔkyerɛwee? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Afeha a edi kan abakɔsɛm kyerɛwfo Flavius Josephus kaa Yakobo wu ho asɛm. Ɔkae sɛ Yakobo yɛ “Yesu a na wɔfrɛ no Kristo no nua.” (Jewish Antiquities, Book XX) Nhomanimfo pii ka sɛ asɛm no yɛ nokware. Nanso Josephus kaa asɛm bi wɔ ne nhoma koro no ara mu a nhomanimfo bi nnye ntom sɛ ɛyɛ nokware. Saa asɛm no pue ɔfã a wɔato din Testimonium Flavianum. Asɛm a ɛwɔ hɔ ni:
“Saa bere no na onyansafo bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Yesu. Ná ɔyɛ obi a ɔyɛ anwonwadwuma, enti minnim mpo sɛ ɛyɛ papa sɛ yɛfrɛ no onipa o. Na nnipa pii ani gye ne nkyerɛkyerɛ ho. Na Yudafo ne Amanaman mufo pii ba ne nkyɛn. Ɔno ne Kristo no, na bere a atitiriw bi tutu guu Pilato asom ma wobuu no kumfɔ no, wɔn a wɔdɔ no annyaw no. Nnansa akyi no oyii ne ho adi kyerɛɛ wɔn sɛnea na adiyifo no ahyɛ ho nkɔm no. Bio nso na adiyifo no ahyɛ nkɔm sɛ ɔbɛyɛ anwonwade foforo mpem du. Ɔno na ɔmaa Kristofo nyaa wɔn din, na ɛde besi nnɛ nyinaa Kristofo da so wɔ hɔ.”—Josephus—The Complete Works, a William Whiston kyerɛɛ ase.
Bɛyɛ mfe ahanum ni na nhomanimfo agye asɛm yi ho akyinnye denneennen; ebinom se nea Josephus kyerɛwee no yɛ nokware, ebinom nso se ɛnyɛ Josephus ankasa na ɔkyerɛwee. Saa akyinnyegye yi akɔ so bɛboro mfe ahanan ni. Franseni nhomanimfo a wɔfrɛ no Serge Bardet apɛɛpɛɛ asɛm no mu, na wakyerɛw ho nsɛm pii wɔ nhoma bi mu.—Le Testimonium Flavianum—Examen historique considérations historiographiques (Testimonium Flavianum—Abakɔsɛm ne Ɛho Mpɛɛpɛɛmu).
Ná Josephus nyɛ nhomakyerɛwfo a ɔkyerɛw Kristofo ho nsɛm. Mmom na ɔyɛ Yudani a ɔkyerɛw Yudafo abakɔsɛm. Enti nea ɛkɔfaa akyinnyegye no nyinaa bae ne asɛm a ɔkae sɛ Yesu ne “Kristo no.” Bardet kae sɛ, sɛ Josephus ka sɛ Yesu ne “Kristo no” a, ɛyɛ ne kwan so efisɛ ɔkyerɛw asɛm no wɔ Hela kasa mu, na Hela kasa mu de, wɔtaa de asɛmfua “no” bata nkurɔfo din ho. Bardet kae sɛ eyi nyinaa si so dua sɛ Yesu yɛ obi a ɔtenaa ase ankasa. Nokwasɛm yi na anka ɛsɛ sɛ akyinnyegyefo no gye tom.
So ɛyɛ nokware sɛ obi na ɔhyɛɛ da suasuaa Josephus kyerɛw saa asɛm no hyɛɛ ne nhoma no mu? Bardet kae sɛ, sɛ ɛyɛ ampa sɛ obi hyɛɛ da suasuaa Josephus a, ɛnde na onipa no ho yɛ nwonwa paa. Na Josephus nkyerɛwee yɛ soronko, enti sɛ obi tumi suasua no paa na ne ho anna hɔ a, ɛnde na saa nipa no aben sen obiara.
Ɛnde, dɛn nti na nhomanimfo bi gye Josephus asɛm no ho kyim? Bardet ma yehu nea ɛkɔfaa akyinnyegye no bae ankasa. Ɔkae sɛ nea enti a nhomanimfo pii gye asɛm a ɛwɔ Testimonium no ho kyim sen abakɔsɛm biara ne sɛ wɔn mu pii nnye ntom sɛ Yesu ne Kristo no.
Yennim ara sɛ nhwehwɛmu a Bardet ayɛ yi bɛsesa adwene a nhomanimfo wɔ wɔ Testimonium Flavianum no ho a. Bardet nhwehwɛmu no ama ɔbenfo bi a wɔfrɛ no Pierre Geoltrain ahu asɛm no ani so yiye. Kan no na osusuw sɛ saa Testimonium a Josephus din da so no yɛ obi foforo asɛm, na odii wɔn a na wosusuw sɛ ɛyɛ nokwasɛm no ho fɛw mpo. Nanso akyiri yi ɔsesaa n’adwene. Ɔkae sɛ Bardet asɛm no na ɛma ɔsesaa n’adwene. Geoltrain kae sɛ: “Efi nnɛ rekɔ, ɛnsɛ sɛ obiara gye akyinnye ka sɛ ɛnyɛ Josephus na ɔkyerɛw asɛm no.”
Yehowa Adansefo wɔ biribi a ɛkyɛn so a ɛma wogye di sɛ Yesu ne Kristo no. Bible no ankasa ka saa.—2 Tim. 3:16.